အဆိုပါ Sneaky တကြ် CPA ကတော့ 2.0 - ရိုးရှင်းသောထိရောက်သောကတော့ Create ရန်ကဘယ်လို - အဆိုပါနေ့၏ကတော့
အဆိုပါ Sneaky တကြ် CPA ကတော့ 2.0 – ရိုးရှင်းသောထိရောက်သောကတော့ Create ရန်ကဘယ်လို
ဟယ်လို ဤနေရာတွင် Jesisco,
Big ခွင : ရလဒ်တွေကိုပုံမှန်မဟုတ်. ငါသည်သင်တို့ကိုတူညီတဲ့ရလာဒ်များအရလိမ့်မယ်ကတိပေးမဟုတ်ပါဘူး. သငျသညျလျော့နည်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်သူအားမျှသို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား. ဒါဟာအားလုံးကိုသင်မှတက်မယ့်.
၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်သင်ကအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါသည် Sneaky တကြ် CPA ကတော့ဗားရှင်း 2.0. ငါတတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်၌သင်တို့ကိုငါထက်လျော့နည်းအတွက်တကြ် CPA Affiliate အဖြစ် sucessful ဖြစ်လာစရာမဟာဗျူဟာရှိခြင်းလက်မှလုယူအတိအကျခြေလှမ်းများပြရန်ဤသို့အလုပ်တွေအများကြီးထားကြပြီ 21 ရက်ပေါင်း.
ငါသည်သင်တို့အဘို့အပြည့်စုံကတော့ built, သငျသညျအဆုံးမှာအခမဲ့ Download ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်သင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်တည်ဆောက်မှလေ့လာသင်ယူနိုင်. ငါအခမဲ့ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ခြေလှမ်းနှင့်အတူလာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်နိုင်လုပ်.
တကြ် CPA စျေးကွက်ကဘာလဲ
တကြ် CPA စျေးကွက် ဝယ်ယူနှုန်းသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ် (တကြ် CPA), ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ “အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှုန်းကုန်ကျစရိတ်” သို့မဟုတ်ဝယ်ယူနှုန်းပေးဆောင် (PPA) နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကူးပြောင်းနှုန်း, ကြော်ငြာရှင်တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောသင်ယူမှုအဘို့အချေအဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအွန်လိုင်းကြော်ငြာစျေးနှုန်းမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် – ဥပမာတစ်ခုရောင်းချ, ကလစ်, သို့မဟုတ်တင်ပြရန်ဖွဲ့စည်း (ဥပမာ,, အဆက်အသွယ်တောင်းဆိုချက်အရ, သတင်းလွှာ sign up ကို, မှတ်ပုံတင်စတာတွေ).
သငျသညျတကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ် app များကိုမြှင့်တင်ဘို့ကော်မရှင်သို့မဟုတ်အခကြေးငွေဝင်ငွေ.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်တကြ် CPA marketer အဖြစ် client ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြဘူး. လက်ျာဘက်ပြုမိပါလျှင်ထိုအကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်အဖြစ်အလွန်အမြတ်အစွန်းဖြစ်နိုင်.
သင်အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ကဘာလဲ : အသိပညာ + အရေးယူ
သင်ဒီမှာပထမဦးဆုံးတစျခုရှိပါလိမ့်မယ် (အသိပညာ). အရေးယူဥစ္စာ. သငျသညျပြုမူဘူးဆိုရငျသင်သည်တစုံတခုကိုမွငျလိမျ့မညျမဟု. ဆိုတောင်းပန်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်ကိုယ့်သင်တို့အဘို့အလွန်ရှင်းလင်းသောစေခငျြတ.
အကောင်းဆုံးတကြ် CPA ကွန်ရက်များ
တချို့ကကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ် apps များအကြားသငျသညျဆောင်ကြဉ်းနိုင် $0.1 သို့ $15 ပြီးစီးခဲ့အရေးယူနှုန်း. ထိုသူတို့ကလူကြိုက်အများဆုံးတကြ် CPA ကွန်ရက်များပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့နိုင်. join ဖို့နဲ့လုံးဝအခမဲ့. ငါလေ့လာသူအဖြစ်တဦးတည်းရွေးချယ်အဲဒါကိုကပ်ရန်အကြံပေးချင်ပါတယ်မယ်လို့.
အကောင်းဆုံးတကြ် CPA ကတော့
ဒီယူဆပါစို့ – ကျနော်တို့သုံးစွဲ $20 အသွားအလာအရ (100 ပစ်မှတ်ထား clics) $2ချေတဲ့တကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန် / action ကိုပြီးစီး.
အဆိုပါ commoun နည်းလမ်းများ
ယေဘုယျအားဖြင့်ကဒီမှာကလူတကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုမြှင့်တင်ရန်ပုံ : သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဆင်းသက်စာမျက်နှာအသွားအလာကိုမောင်း (တစ်ညှစ်စာမကျြနှာ / တစ် presell စာမျက်နှာ / site တစ်ခု ...) နှင့်အဖြစ်မကြာမီအလားအလာကိုသူတို့ရဲ့မေးလ်စာရင်း join အဖြစ်, သူသည်တကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှ redirected ဖြစ်ပါတယ်. ဤနည်းလမ်းကိုအကျင့်ကိုကျင့်. ဒါပေမယ့်ငါ့အ« sneaky တကြ် CPA ကတော့»တစ်ဦးထက်လျော့နည်းအမြတ်အစွန်းရဲ့.
ဒီနေရာတွင်ကနေပုံမှန်ရလဒ်များကိုများမှာ 100 ကလစ်
ကျွန်တော်တို့ဟာတယ် 40 optins
အဘို့ 37% ကျနော်တို့ရတယ်ကူးပြောင်းနှုန်းမှာ 15 ပြီးစီးခဲ့လုပ်ရပ်များ.
ဒါကင် $30 ဝင်ငွေအဖြစ်
$10 အမြတ်အစွန်း. ကျနော်တို့အမြတ်အစွန်းအတွက်ပါပဲ.
တခါတလေလူတွေကိုကမ်းလှမ်းမှုကိုတိုက်ရိုက်အသွားအလာကိုမောင်းနှင့်ထက်ယေဘုယျအားဖြင့်လျော့နည်းရ 10% ပြောင်းလဲခြင်းမှုနှုန်း.
ဒီနေရာတွင်လည်းထံမှပုံမှန်ရလဒ်များကိုများမှာ 100 ကလစ်
ဒါကင် $20 ဝင်ငွေအဖြစ်
$0 အရှုံးအဘယ်သူမျှမအမြတ်အစွန်းမျှ. ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမဟုတ်ပါဘူး.
Sneaky တကြ် CPA ကတော့ – တကြ် CPA ကော်မရှင် crash ရန်နည်းလမ်းသစ်
သငျသညျ draffic ကားမောင်းမတိုင်မီအရပျ၌တစ်ဦး« sneaky တကြ် CPA ကတော့»လိုအပ်ပါတယ်.
တစ်ဦး« sneaky တကြ် CPA ကတော့»ဘာလဲ ?
ဒါဟာနှစ်ဆသို့မဟုတ်ပင်အတူတူပင်အသွားအလာမှသင်၏«အမြတ်အစွန်း»သုံးဆခွင့်ပြုမျိုးစုံတကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုန်းကျင် built တစ်ဦးကတော့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာနီးပါးအခမဲ့ကော်မရှင်လုပ်သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်.
အဆိုပါ tools များ
(မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: အချို့သော Affiliate လင့်များဆံ့)
သင်သည်သင်၏ sneaky တကြ် CPA ကတော့ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါ tools တွေလို :
တစ်ဦးက site ကို• အကယ်. (domain name ကို) နှင့် / သို့မဟုတ် clickfunnel
3သို့4တကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှု (Affiliate လည်းအလုပ်ကမ်းလှမ်း)
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ် – အဆိုပါဒဿနိကဗေဒ Sneaky တကြ် CPA ၏ကတော့
ကျနော်တို့ကိုမောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ်ထား 100 ဆင်းသက်စာမျက်နှာ clics. သူတို့ရဲ့အလွန်ပထမဦးဆုံး clic ကမ်းလှမ်းမှုမှဦးဆောင်. ပထမဦးဆုံးအတကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖြစ်ပါသည် ($2 ပြီးစီးပါလျှင်) နှင့်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ရဲ့ optin စာမျက်နှာ.
ငါတို့သည်အတူတူ stats စောင့်ရှောက်လျှင်, ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ရလဒ်ကဲ့သို့ငါကဘာလဲ :
မှ 100 ကျနော်တို့ရတယ် clics 40 optins.
တိုင်း optin ဆောင် clic အားဖြင့်များပြားစေပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာအတည်ပြုချက်စာမျက်နှာ redirected ဖြစ်ပါတယ်2နောက်တဖန်. အခြားတကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုကိုများအတွက်ပထမဦးဆုံး ($2 ပြီးစီးပါလျှင်) ဒုတိယသငျသညျစာမျက်နှာကျေးဇူးသွား.
ငါတို့မှာရှိတယ်2တကြ် CPA ပြီးစီးခဲ့ရကြောင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်း. $2/အရေးယူ.
အကြမ်းအားဖြင့်ကျနော်တို့လုပ်ပေးနိုင် $2+$2+(2*$2)= $ 8 / ခဲ
ဒါကကျော်ဖွင့် $320 အားလုံးသူတို့အဘို့ 40 optins. သင်ဆဲတစ်ဦး thorugh ကမ်းလှမ်းမှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်5day email series. အမြတ်အစွန်းဖြစ်ပါသည် $300 ကျနော်တို့အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတည်ဆောက်ခြင်းနေ.
ဒါကကျနော်တို့« sneaky တကြ် CPA ကတော့»ပဌနာဘာ. ဒါကကတော့တစ်ဦးထံမှ $ 6-8 $ / ခဲဘဏ်ကူညီပေးသည် $2 တကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုကို. မြင့်ပေးချေမှုပိုကောင်း.
သငျသညျကတော့ဒီလိုမျိုးဖန်တီးသွားနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုသိပါစေ .... သို့မဟုတ်ပဲဤနေရာတွင်ခြေလှမ်းသင်ခန်းစာခြင်းဖြင့်ငါ၏အခြေလှမ်းသွားရောက်ကြည့်ရှု.
မင်းမသွားခင်, ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့သင်ကတော့အဘို့ပြုနေသည်, သငျသညျဥစ္စာတည်ဆောက်ရန်အချိန်မရှိဘူးလျှင်. သငျသညျ Download ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါ clickfunnels ကနေတဆင့်မျှဝေတာပါ. သင်တို့အဘို့ကိုဖန်တီးရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ နှင့် သင့်ရဲ့ sneaky တကြ် CPA ကတော့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
အခုဆိုရင်လာမယ့်အဘယ်အရာကိုဖွင့်? အရေးယူနှင့်သင့်ကတော့ရန်အသွားအလာကားမောင်းစတင်ရန်. ရိုးရိုး.
ပိုပြီးထောက်ခံမှုများအတွက်, သငျသညျမှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ် [email protected]